Paul Pogba Oo Ka Jawaabay Wararka Sheegaya In Uu Isaga Fadhiistay Xulka Qaranka France Kadib Markii Madaxweynaha Dalkiisu Aflagaadeeyay Nabi Muxammed - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
October 26, 2020 at 20:05 Paul Pogba Oo Ka Jawaabay Wararka Sheegaya In Uu Isaga Fadhiistay Xulka Qaranka France Kadib Markii Madaxweynaha Dalkiisu Aflagaadeeyay Nabi Muxammed2020-10-26T20:05:33+02:00 CAYAARAHA
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man United Paul Pogba ayaa ka jawaabay wararka sheegaya in uu isaga fadhiistay xulka qarankiisa France.
Wargayska The Sun ayaa sheegay in uu xiddiga Paul Pogba isaga fadhiistay u ciyaarista xulka qaranka France kadib markii uu madaxweynaha France ee Emmanuel Macron uu Aflagaadeeyay diinta Islaamka iyo waliba Nebi Maxamed c.s.
Paul Pogba oo bartiisa bulshada kaga jawaabaya arintaas ayaa yidhi”The Sun ayaa mar kale samaysay, shaki la’aan wararkaas wax run ah kama jiraan, waxba ma sheegin xitaa kama fikirin in aan joojiyo u ciyaarista xulka France”.
“Aad ayaan uga xanaaqsanahay saxaafada waxan ay adeegsanayaan magacayga si ay u sameeyaan ciwaano iyaga oo adeegsanaya waxa haatan ka jira France”.
“Anigu waan ka soo hor jeedaa wax walba oo dhibaato ah waxana aan ka xumahay in wargaysyada qoraya waxaas ayna masuul ahayn waliba faafinayaan warar been ah”.
‘Waxa aan marsiin doonaa sharciga cid walba oo faafisay wararkaas beenta ah”.
« Ninkii gacanta midig u ahaa Saddaam Xuseen oo 17 sano la raadinayay oo maanta la shaaciyay geeridiisa
Dilalka qorsheysan ee ganacsatada oo ku soo badanaya Kismaayo »